Ahoana no fomba hanovako fitsipika ao amin'ny Outlook 365? - Microsoft Outlook
Tena > Microsoft Outlook > Tonian-dahatsoratry ny lalàna Outlook - ahoana no hanapahanao hevitra
Tonian-dahatsoratry ny lalàna Outlook - ahoana no hanapahanao hevitra
Ahoana no fomba hanovako fitsipika ao amin'ny Outlook 365?
Eo an-tampon'ny pejy, safidio ny Settings. > Hijery rehetratoe-tsainafanovana.
Safidio ny mail>Fitsipika.
Ao amin'nyfitsipikaianao dia teOvay, safidio.
Tsindrio Save raha tehirizo ny voahitsyfitsipika.
7 aog 2019
Salama daholo, Neil Malek miaraka amin'ny Knack Training dia mitondra lahatsoratra momba ny birao isan'andro ho anao, ary amin'ny lahatsoratra anio dia hasehoko anao ny teknika voalohany amin'ny telo azonao ampiasaina hamaliana ny mailaka modely. Araka ny nolazaiko, ity no teknika voalohany amin'ny telo, hivoaka aho anio miaraka amin'ny lahatsoratra faharoa sy telo mba hahitanao izay teknika mety indrindra amin'ny toe-javatra iainanao. Ny tsotra indrindra amin'ireto teknika telo ireto dia ny fampiasana ilay antsoina hoe Quick Steps.
Dingana haingana dia mora ny mamorona bokotra. Tiako ny mieritreritra azy ireo fa tsy makrô kaody. Rehefa mankany an-tampon'ny efijery aho eto ary mamaky ny 'Mamorona dingana haingana vaovao' dia mamorona bokotra vaovao aho, araka ny hitanao amin'ny toe-javatra hafa, mamaly mailaka ary mamafa izany na mampita izany amin'ny manager, sns.
Ka raha hitako ny Mamorona Vaovao ary manapa-kevitra ny te-hamaly mailaka manokana aho, dia ho hitanao fa afaka misafidy aho na hoe Mamaly sy mamaly. Mandrosoa ary safidio eto ary avy eo valio daholo ny safidy Asehoy dia ho hitanao fa manana ny Safidio ny mampiditra ny fampahalalana momba ny lahatsoratra sy ny môdely. Jereo izao ireo zavatra roa izay tsy azontsika atao eto amin'ity faritra ity. Ny zavatra voalohany tsy azontsika atao dia ny tsy ahafahantsika mamolavola ny lahatsoratr'ity valiny ity ary ny zavatra faharoa izay tsy azontsika atao dia ny tsy ahafahantsika mampiditra miraikitra ao amin'ity valiny ity.
Fa raha manandrana mamaly amin'ny atiny modely mitovy foana isika isaky ny mandeha, dia fomba mora foana hamaliana amin'ny fahatongavany, ary izany dia mety ho toy ny adiresin'ity trano ity: 11456 First Avenue Richmond, Virginia. Antsoy eo am-bavahady i Harrison Barnesas ho fifandraisanao .Mahafinaritra, ka eto no ahatsapanao fa mahafinaritra.
Namorona ny valinteninao tamin'ny fahatongavanao ianao dia afaka manindry ny Vita eto ambany ary afaka mahita ny valiny amin'ny fahatongavanao eto akaikin'ny valinteninao ianao ary mamaly ny bokotra rehetra. Ary noho izany, amin'ny ankapobeny, azonao atao izany ho an'ny maro amin'izy ireo araka izay ilainao. Azonao atao ny manindry an'io menio milatsaka kely io izao, afaka misafidy, Mamorona Vaovao ianao ary izao raha mila mamaly valiny manokana ianao dia andao lazaina hoe mamaly ireo olona mangataka asa ianao.
Azonao atao ny mamaly miaraka ary mety ho toy ny App Info amin'ny valiny tsotra fotsiny eto. Asehoy ny safidinao ary lazao zavatra toy ny Misaotra anao tamin'ny fampiharana nataonao. Hiverina aminao ao anatin'ny ...
lesoka fampiharana runtimebroker.exe
Oad, miverina ao anatin'ny 48 ora miaraka aminao. Nahavita ny farany ambany aho ary izao izahay dia valiny miaraka amin'ny mombamomba ny fampiharana sy ny valiny miaraka amin'ny mombamomba ny fahatongavana eto an-tampon'ny efijery, eo akaikin'ny valiny sy valiny ho an'ny rehetra. Tahaka ny nolazaiko, ireto no roa ... ireto no fomba mora indrindra hahatonga ity asa ity ho lasa lavitra, laharana voalohany, mamorona bokotra izay mety amin'ny toerana hafa noho ity tontonana Quick Steps ity, laharana faharoa ahafahana mamolavola ny atin'ity mailaka ity sy ny laharana fahatelo hahafahana mamaly zavatra amin'ny maha-miraiki-po anao dia mila mampiasa fiasa hafa mampiasa makrô a ianao.
Ary ho hitanao tsy ho ela ireo lahatsoratra ireo.
Ahoana no fomba handaminana ny fomba fijeriko?
Mamorona afitsipikaavy amin'ny maodely
Safidio ny rakitra> TantanoFitsipika& Fanairana> Vaovaofitsipika.
Misafidiana modely iray. Ohatra, ny faneva hafatra: ...
Amboary nyfitsipikafamaritana. ...
Safidio ny manaraka.
Safidio ny fepetra, ampio ny fampahalalana mifandraika, ary avy eo safidio OK.
Farano nyfitsipikahametraka. ...
Safidio ny famaranana.
Ahoana no ahafahanao manangona fotoana sy ezaka amin'ny fitantanana ny mailakao amin'ny alàlan'ny fisehon'ny fampirimana ao amin'ny Microsoft Outlook? Salama, Dawn Bjork aho, The Software Pro. Izaho koa dia Microsoft Certified Trainer. Amin'ity fiofanana ity dia hifantoka amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo lahatahiry ao Outlook izahay.
Inona ny toetranao Outlook? Filer ve ianao sa piler? Izany dia hoe, mamindra hafatra amina folder maromaro ve ianao, sa mitazona ny ankamaroan'ny hafatrao ao anaty boaty? Ny ankamaroan'ny olona dia mamela azy ireo ao anaty boaty, ary na dia miaraka amin'ireo fitaovana fikarohana mafy sy Outlook aza, ny fitazonana ny hafatrao rehetra ao anaty boaty dia fivoarana lehibe amin'ny famokarana satria matetika ianao no mikitika hafatra imbetsaka. Mora ihany koa ny tsy mahita ireo hafatra manandanja satria handinika ny atiny maro ao anaty boaty ianao raha mila mitazona hafatra ho an'ny boky ho avy. Ataovy madio ny boaty fampidirana anao ary afindra amin'ny fampirimana mety.
Andao hifantoka amin'ny fiasa amin'ny lahatahiry. Ankehitriny, maro ireo mpampiasa Outlook no mamorona sy miara-miasa amina lahatahiry misy lohahevitra toa ny mpanjifa ary eo amin'ireo mpanjifa dia mety misy ny Big Important Corporation sns. Ankehitriny dia tsy ho ela dia hiova io ambaratongam-pahefana io avy amin'ny mpamokatra ho amin'ny sarotra misy folder sy lohahevitra be loatra, miaraka amin'izany maro amintsika no manamarina mailaka amin'ny finday, mety hisy dikany bebe kokoa ny toerana misy azy io.
Diniho ny mifamadika avy amin'ny lohahevitra mifototra amin'ny rafitra fampirimana mifototra amin'ny hetsika. Ho mora kokoa io. Ohatra mihantona, toeram-piantsonana, namboarina, referansa.
Mety misy fampirimana famakiana, hafatra izay sintominao mandritra ny fotoana andehananao na tsy dia nifantohanao tamin'ny mailakao. Manokana, d. H. lahatahiry miorina amin'ny hetsika H., manome toerana anao handefasana hafatra nefa tsy manana rafitra fampirimana tena sarotra.
Ankehitriny azonao atao ny mamantatra izay fomba mety indrindra aminao, dia azonao atao ihany koa ny mampiasa fangaro amina lohahevitra sy lahatahiry miorina amin'ny hetsika. Andeha hojerentsika ny fomba samihafa hamoronana fampirimana dia ny tsindrio havanana eo amin'ny lahatahiry voalohany na ray aman-dreny toa ny Inbox. Ohatra, ho an'ny mpanjifa, azoko atao ny manindry bokotra eto ary mahita ireo safidy rehetra ireo, ary tafiditra ao anatin'izany ireo fitaovana fitantanana fampirimana hafa.
Aza hadino ny mijery azy ireo. Amin'ity tranga ity dia hamorona fampirimana vaovao aho ary mety ho Big Client lehibe izao. Mifanohitra amin'ny filozofia izany fa mifototra amin'ny hetsika ary voalohany indrindra tiako ho hitanao eto fa afaka mikatona mora foana isika avy eo.
Ity ny fomba hybrid miaraka amin'ireo lahatahiry miorina amin'ny hetsika, ohatra, Miandry. Tianay hapetraka eto izany eo am-piandrasana ny tohiny mba hahafahanay manisy marika azy io amin'ny fanaraha-maso ao amin'ny Outlook ary hahita azy indray avy eo. Izany dia nilaza fa mety manana zavatra voahodina ianao, tsy te-hanary azy fotsiny aho izao, saingy tsy mila miditra anaty fampirimana izany, midika izany fa afaka miverina aminy tsy tapaka ianao ary mamafa fotsiny izany.
Ka eritrereto indray izay mety aminao. Fomba iray hafa ahafahantsika mamorona fampirimana amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny tabilao 'Folder' ary eto dia hitantsika ny 'Folder Vaovao' eo ankavia. Ny hitsin-dàlana fitendry an'ity dia CTRL + SHIFT + E, noho izany dia fomba iray hafa iasana amin'ny fampirimana na mamorona fampirimana vaovao.
Mametraka anao ao anaty boaty fifampiresahana izy io, ka fomba hafa fotsiny dia ho hitanao fa haingana kokoa ny miasa ny menio tsindrio. Manomboka eto, raha hiompana amin'ny lohahevitra aho, angamba raha mikasa fihaonambe ho avy aho, angamba mamorona vaovao eto aho ary misafidy fotsiny, OK, ka paikady samihafa amin'izany. Jereo ihany koa raha namorona fampirimana isika na tsia, manana safidy eto ihany koa isika miorina amin'ny toerana misy antsika.
Avy eo dia hanana ny safidy isika, ohatra, amin'nity tranga ity dia fampirimana tsy misy io, fa azontsika atao ny mifantoka amin'ny fanovana anarana, kopia, famindrana, famafana ary hijerena ireo safidy rehetra ireo dia horesahintsika bebe kokoa ao anatin'ny fotoana fohy ary hanampy ankafizinay ny fanadihadiana ihany koa. Safidy maro no azontsika raha resaka fitantanana fampirimana, na miasa amina fampirimana vitsivitsy na maro ianao, ny lakilen'ny fanadiovana ny boaty fampidirana anao dia tsy ny fanipazana hafatra marobe any an-toeran-kafa, na andramo angamba ianao amin'ny toro-hevitra momba ny fitantanana ny fotoana sy ny famokarana isan-karazany. Jereo hoe izay mety aminao indrindra.
Fomba tsotra, indrindra rehefa miasa miaraka amin'ny boaty fampidirana anay isika, dia ny mandray fanapahan-kevitra mba tsy hanohizantsika hafatra. Te hamafa azy ve isika? Hanao izany ve isika? Izany hoe raha minitra vitsy fotsiny dia mety ho mora kokoa ny manamarika azy ho fanarahana na manandrana mahatadidy azy avy eo. Zavatra tokony hataon'ny olon-kafa tokoa ve izany? Raha fantatrao fa haharitra kokoa izany, angamba tokony esorinao ilay izy ary avy eo atoao azy ho fanaraha-maso na ataovy ho fotoana voatondro hijerena sy hitondrana azy aza.
Ireto ny sasany amin'ireo zavatra izay mety tianao ho dinihina koa. Tsy ny famoronana firafitra fampirimana fotsiny fa ny hoe mila miditra ao anaty fampirimana ireo hafatra ireo mba hahafahanao manafoana ny boaty. Ahoana ary no ahafahantsika mamindra hafatra? Eny, misy safidy maro samihafa amin'izany.
Ny iray dia ny fitarihantsika hafatra fotsiny etsy. Ka eto indray isika, raha manana fampirimana bebe kokoa, dia mety ho sarotra kokoa io. Fa ho an'ity hafatra ity, ohatra, tiako ny handeha ao amin'ny mailaka teknolojia hahafahako misintona an'ity fotsiny.
Ho hitanao izao ao amin'ny A Moment izay misy ny Folder Favorite fomba hanamorana izany. Manana ny safidy hifindra ihany koa isika ary afaka manampy antsika amin'ny fomba maro io. Ao amin'ny takelaka Home of the ribbon, misy ny Mifindra eto.
Ary ho hitantsika eto ireo toerana vaovaonay vaovao. Ary izany dia ho fomba iray ho antsika. Safidy iray hafa ny tsindrio havanana amin'ny hafatra iray ary azonao atao ny mifindra azy io avy eo.
Tena mitovy amin'ny fiasa amin'ny alàlan'ny fakan-tsarimihetsika ary avy eo dia azonao atao ihany koa ny mifindra amin'ny lahatahiry hafa ary mitantana azy ireo. Safidy iray hafa ny hitsin-dàlana fitendry CTRL + SHIFT + V. Mety tsy ho mora ho hitanao io fa hisy hitsin-dàlana fitendry hahalalanao fa fomba iray hafa hamindrana hafatra ity.
Ary farany, afaka namorona fitsipika tao amin'ny Outlook izahay mba hamindrana ho azy ireo hafatra avy amin'ny boaty fampidirana mankany amin'ny fampirimana manokana. Ary izany no mety hitranga amin'ny zavatra toy ireo takelaka tekinika izay tiako hovakiana nefa koa tsy te handray amin'ny hevitr'ireo laharam-pahamehana ambonimbony kokoa hiarahako miasa. Andao hiverina ireo teboka izay ampiasaintsika matetika, satria afaka mampiasa ny tiantsika isika.
Ankehitriny ity dia fitaovana tena mahavonjy fotoana be dia be, ohatra ny taratasiko momba ny haitao, te-hiara-hiasa amin'izy ireo aho. Tsindrio havanana eto aho ary tsindrio ankavia eo amin'ny Add to Favorites. Ity dia safidy iray izay azo alaina ao amin'ny bara fisie koa ary na tsindrio havanana eo aminy na azoko atao ny misafidy Add to Favorites avy amin'ny ribbon.
Ny zava-mitranga amin'izany dia ny famoronana faritra tianao indrindra ambonin'ilay firafitra fampirimana fidirana voalohany ary azonao atao ny manohy manampy an'izany. Ankehitriny ireo dia hitsin-dàlana fotsiny ary manana ny safidy foana ianao, ohatra, amin'ny tsindrio havanana ary avy eo esory amin'ny toerana tianao. Izany dia nilaza fa mety hanana tetikasa mivoaka sy mivoaka ianao.
Avy eo mety misy zavatra sasany tsy anananao ary mila mifantoka bebe kokoa amin'ny fanesorana ireo tianao. Hitsin-dàlana fotsiny izany ary noho izany tsy hamafana ny atiny mety hitranga ianao raha esorinao ara-batana ilay fampirimana izay ananantsika ao anaty boaty. Ireto no tianao indrindra dia ireo zavatra azonao alamina ihany koa ny taratasim-baovao, azonay ampiana hafa koa eto.
Ary izany dia azo amboarina be avy eo mba ho mora kokoa. Ohatra, eto aho manana mailaka momba ny iray amin'ireo fihaonambe ireo ary afaka misintona fotsiny ary manome azy ireo. Ireto koa misy zavatra ho an'ny taratasim-pampianarako.
Ka lasa fomba iray hafa ahafahana miditra mora foana io ary na dia manana firafitra fampirimana somary fatra-paniry laza aza ianao. Ny zavatra hafa tsy tokony ho adino dia ny ao anaty lahatahiry misy anao, na miasa amin'ny tianao na tsia dia azo ahodina indray izy ireo. Tena manampy izany ary zavatra tsy nisy tamin'ny kinovan'ny Outlook teo aloha.
Ary izany no mahatonga ny olona maro mbola tsy mahalala an'io. Ka manomboka eto, raha ity no iray amin'ireo fihaonambe laharam-pahamehako, dia mety hitarika azy ireo aho, angamba tetikasa manan-danja izay tiako hatsangana. Mety misy zavatra hafa tiako haverina.
Ary noho izany dia tsy ilaina intsony ny manao izany amin'ny abidia abidia. Saingy na oviana na oviana ianao mitady fatra-paniry laza loatra na te hampody azy ireo amin'ny toetrany tany am-boalohany dia afaka mifamadika amin'ny fampirimana fotsiny ianao. Ankehitriny dia azo ampidirina eto manokana amin'ny kaonferansa.
Azoko atao ny tsindrio tsara eto ary milaza fotsiny ireo zana-taratasin-dahatsoratra A hatramin'ny Z ka afaka mahita ny miakatra sy midina koa ianao. Ka ireo dia azo alamina indray na mandeha any amin'ny boaty. Ary mariho fa ity safidy ity dia misy ao amin'ny tabilao Folders ao amin'ny ribbon koa.
Avy eto aho dia afaka nandahatra ireo tamin'ny filaharan'ny abidia. Ahoana no ahafahanao manararaotra ny lahatahiry ary mampandeha azy ireo hiasa tsara kokoa mba hitsitsiana fotoana sy hanadio ny boaty fampidirana anao? Hitanao izao ny fomba ahafahanao manangona fotoana sy ezaka amin'ny alàlan'ny fanararaotana ireo lahatahiry ao amin'ny Microsoft. mampiasa Outlook.
Raha mila toro-hevitra misimisy kokoa momba ny famokarana vokatra miaraka amin'i Microsoft Outlook dia tsidiho TheSoftwarePro.com/Outlook. Raha hitanao fa mahasoa ity fampiofanana ity, toy ny, maneho hevitra, ary misoratra anarana amin'ity lahatsoratra ity.
Ity dia Dawn Bjork, The Software Pro. Misaotra anao nijery.
Ahoana ny fomba hanampianao na ny fepetra apetrakao amin'ny fitsipiky ny Outlook?
toe-tsaina2010/2013/2016/2019: File> Info> TantanoFitsipikaary Fanairana> E-mailFitsipikakiheba ...
Tsindrio Vaovaofitsipikamanokatra nyFitsipikaMagicien.
Ao amin'ny Start amin'ny bangafitsipikafizarana, safidio ny Ampiharofitsipikaamin'ny hafatra azoko ary tsindrio Next.
Eo ambanin'ny dingana 1: misafidytoe-javatra, misafidiana amin'ny teny manokana ao amin'ny lohatenin'ny hafatra.
Miaraka amin'ny hafatra mailaka maro tonga ao anaty boaty inbox isan'andro, mety ho mora ny tsy mahita hafatra avo lenta na zavatra tadiavintsika hamaly haingana kokoa miaraka amin'ny MicrosoftOutlook dia manolotra fomba maro isan-karazany handaminana sy handaminana ireo hafatra ataontsika laharam-pahamehana. Andeha hojerentsika ny fomba ahafahantsika manasongadina ireo hafatra manan-danja na hafatra laharam-pahamehana amin'ny alàlan'ny fampiasana format misy fepetra eto dia ho hitanao fa manana hafatra vitsivitsy avy amin'ny big boss aho ao anaty boaty tsy mampitebiteby. Ireo dia mety ho hafangaro amin'ny hafatra maro hafa mikoriana ao amin'ny Outlook amin'izao fotoana izao, saingy tiako hipoitra ireo hametraka fandefasana fepetra misy fepetra.
Mandehana mankany amin'ny takelaka View, izay ahafahantsika manamboatra sy manova ny fomba fijerintsika ny boaty. Eto izahay dia misafidy ny fizahana fijerena ary mety tianao hizaha izany mba hahafahanao manamboatra izay tsanganana aseho, ny fomba fanasokajiana na ny sivana, ary ny toe-javatra hafa, fa ny ifantohantsika izao dia ny famolavolana fepetra eto dia azonao jerena ohatra ny antony tsy amakiana. ny hafatra dia aseho amin'ny loko matevina sy manga ka fantatrao fa azonao ovaina ity raha mila fampisehoana na safidinao hafa ianao hanasongadinana ireo hafatra manan-danja amin'ny lehiben'ny lehibe aloha, dia hanampy izahay manaraka, safidio ity. Matetika manome anarana famaritana hahafahanao miverena mijery azy any aoriana, misy zavatra roa mety tianao hatao eto. Ny voalohany dia ny fomba tianao hanovana ny fijerin'ny hafatrao ka ny fandefasana fepetra dia miankina amin'ny fepetra tadiavintsika fa tsy hitovy ny fandefasana ny endrika na ny fisehoana - Ho tena mahavariana aho eto raha ny fampisehoana fotsiny. - Azoko atao ny manova ny fomban'ny endritsoratra ary manova ny loko mba hahafahantsika manasongadina azy indray mandeha ho an'ny fampisehoana hataonay io safidy mena io amin'ny iray amin'ireo safidy azonao atao raha vantany vao namboarinao ny fisafidianana, okay , saingy mbola tsy vita ianao satria izahay koa mila manamboatra ny fepetra ampiasana an'ity font ity.
Misafidy ny fepetra izahay ary avy eo mametraka ny fepetra na masontsivana amin'ity tranga ity dia adiresy mailaka manokana izany, saingy azonao atao ny manakaiky ny sivana ary mety ho zavatra mety ho eo amin'ny tsipika na ao amin'ny vatan'ilay hafatra izany, inona no ho eto? manampy ankehitriny fa manana ny adiresy mailaka isika, okay okay ary jereo izay hitranga rehefa vitako miaraka amin'izy ireo mba hisongadinan'izy ireo tokoa ary rehefa tsy tao anaty boaty fampidirako tontolo andro aho na nandeha nivory fotsiny ary lasa. mandritra ny ora roa dia hitako ireo mety ho valiny lohalaharana amiko raha manana fepetra marobe izay manalefaka ny sandan'ny fandefasana fepetra ianao, saingy ity dia mety ho safidy ho anao amin'ny fanevananao ny hafatra lehibe an'ny mpanjifanao ambony avy amin'ny mpanara-maso na hafa mailaka miditra tianao ho azo antoka fa laharam-pahamehana indrindra izy io amin'ny alalàn'ny fampiasana ny format MicrosoftOutlook misy fepetra mba hanasongadinana ireo hafatra manan-danja ireo ho an'ny torohevitra sy teknika misimisy kokoa ao amin'ny Outlook, mitodiha any amin'ny lozisialy Procomslash Outlook ary misoratra anarana amin'ity c hannel ho an'ny toro-hevitra rindrambaiko hafa mitahiry fotoana hafa dia ity ny maraina björk ilay rindrambaiko prodankt hijerena
Ahoana no fomba hamoronana fitsipika ao amin'ny Outlook hiala amin'ny olona iray manokana?
Tsindrio havanana ny hafatra ao anaty boaty mailakao na ny hafamailakafampirimana ary safidioFitsipika. Safidio ny iray amin'ireo safidy.toe-tsainamandeha ho azy soso-kevitramamorona fitsipikamifototra amin'ny mpandefa sy ny mpandray. Raha hijery safidy hafa dia safidioMamorona Fitsipika.
Maninona aho no mila mpanitsy lalàna raha ny fahitany azy?
Hiseho amin'ny takelaka mazava sy tsotra ny lalànanao mba hahafahanao mifehy ny lalanao. Ny add-in dia mpamoaka fitsipika amin'ny fomba mahomby ao amin'ny Outlook, miampy anao hahafahanao mahita fitsipika voafaritra tsara, manasokajy ny abidia araka ny abidia (na amin'ny alàlan'ny fampirimana, na lohatenin'ny tsanganana hafa), ary azonao atao ny manafatra / manondrana lalàna.
Ahoana ny fomba hitantanana hafatra amin'ny mailaka amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba fijery?
1 Safidio ny rakitra & gt; Tantano ny Fitsipika & amp; Fanairana hanokatra ny boaty fifanakalozan-kevitra Fitsipika sy fanairana. 2 Ao amin'ny kiheba Email rules, safidio Fitsipika Vaovao. 3 Safidio ny iray amin'ireo modely amin'ny dingana 1. ... 4 Ao amin'ny Dingana 2: Amboary ny boaty famaritana fitsipika, kitiho ny safidy voafaritra rehetra hametrahana azy ireo. ... 5 Kitiho ny manaraka.
Ahoana ny fanovana fitsipika amin'ny fomba fijery?
Outlook Rule manamboatra 1 Click File & gt; Tantano ny Fitsipika & amp; Fanairana. 2 Zahao ilay boaty eo akaikin'ny fitsipika tianao hanovana. 3 Tsindrio Change Rule, kitiho ny karazana fanovana tianao hatao, ary fenoy ireo dingana. Fanamarihana: Hamafana fitsipika iray, amin'ny dinika Fitsipika sy fanairana ... Jereo bebe kokoa ....
hafatra skype miandry
Misy fomba fanondranana ny Fitsipika Outlook?
Tsy hisokatra ho an'ny valiny hafa. Mila mandamina indray ny fisie Outlook aho. Mampalahelo fa mitahiry ny lalana feno sy ny anaran'ny fisie ho an'ny lahatahiry lasibatra ny Fitsipika. Te-hanondrana ny lalàna aho, hanova ny làlana sy ny anaran'ny fisie ary manafatra azy ireo hiverina. Na izany na tsy izany hanao an'ity? Tsia. Tsy hamoaka ny lalàna amin'ny endrika vakina amin'ny-olombelona na mpamaky fitsipika ny Magicien Fitsipika.